Warbixin: Iska ilow Soo Laabashadii Ay Samaysay Kulankii PSG Waxa Aan Ku Haynaa 3 Sababood Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Doona Soo Laabasho Cajiib Ah – Kooxda.com
Home 2017 April Champions League, Italy, Spain, Wararka Maanta, Warbixino Warbixin: Iska ilow Soo Laabashadii Ay Samaysay Kulankii PSG Waxa Aan Ku Haynaa 3 Sababood Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Doona Soo Laabasho Cajiib Ah
Warbixin: Iska ilow Soo Laabashadii Ay Samaysay Kulankii PSG Waxa Aan Ku Haynaa 3 Sababood Oo Barcelona Ka Hor Istaagi Doona Soo Laabasho Cajiib Ah
Kooxda Barcelona ayaa kulanka caawa isha ku haysa in ay dib uga soo laabato guuldaro 3/0 ahayd oo ay kala kulantay kooxda Juventus kulankii lugtii hore ee ka dhacay dalka Italy.
Laakiin Arinta ayaa haatan ka duwan midii kulankii PSG ee ay soo laabashada cajiibka ah samaysay taariikhda champions league-na ku gashay.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa sababood oo kooxda Barcelona ka hor istaagi kara in ay samayso soo laabasho una gudubto wareega 4 dhamaadka champions league.
Kooxda Juventus ayaa 3 gool ka dhalisay kooxda Barcelona kulankii hore kwaas oo ay horay u soo sameeyeen kulamadii hore ee champions league xilli ciyaareedkan.
Laakiin Juventus ayaa kaliya aha dhaliyay 2 gool tartanka oo dhan sidaa darteed daafaca Barcelona ayaa ah mid aan si dhib yar looga dhalin karin 3 gool iyo wixii la mid ah.
Barcelona ayaa u baahan 3 gool hadii ay doonayso in ay kulanka bar-baro gasho halka ay 4 gool u baahantahay hadii ay doonayso in ay kulanka guul kala baxdo una gudubto wareega xiga.
Arintan ayaa tababare Luiz Erique ku qasabtay in uu shirkiisii ka dhex yiraado in uu doonayo in ay kooxdiisu 5 gool dhaliso hadii ay doonayaan in ay soo gudbaan.
waayo waxa uu ogyahay in uuna meesha daafacyo ku haysan kuwas oo ilaashan kara goolkooda 90-ka daqiiqo ee ay ciyaartu socot.
Barcelona ayaa laga dhaliyay 7 gool 3-dii kulan ee ugu dambeeyay inkasta oo ay horyaalka yihiin kooxda 2-aad ee ugu daafaca adag.
3.Khibarada Iyo Caqliga:
Marka aynu ka hadlayno Juventus waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu adag uguna caansan kubada cagta Yurub iyaga oo ahaa qaar qaab ciyaareed fiican ku jira sanadihii ugu dambeeyay.
Waxa ay haatan qarka u saaran yihiin koobkoodii 6-aad ee horyaalka Italy oo xiriir ah iyaga oo sidoo kale ciyaaray finalkii champions league sanadkii 2015 iyaga oo waliba ka reebay kooxda Real Madrid.
Juventus way ka duwan tahay kooxda PSG kooxda marwada duqda ah waxa ay leedahay khibrad fiican oo sanado ah kuwaas oo ku soo guulaystay koobab badan oo kala duwan lamana mid noqon doonaa qiimaha Barcelona.